Oday-dhaqmeedyada oo durbada ay soo wajahdey Daryeel iyo Hooy La’aan ka dib markii lagu wargeliyey in howshoodii dhamaatey – idalenews.com
Oday-dhaqmeedyada oo durbada ay soo wajahdey Daryeel iyo Hooy La’aan ka dib markii lagu wargeliyey in howshoodii dhamaatey
Markii Dhowaan lagu wargeliyey Odey-dhaqameedyada Soomaaliyeed oo in muddo ah ku howlanaa soo xulista xubnaha barlamaanka Soomaaliya in howshoodii dhamaatey isla markaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ugu noqdaan meelahii ay yimaadeen, ayaa waxaa soo wajahey daryeel xumo xaga nolosha ah. taasoo ugu wacan tahay in dhaqaalihii ku bixi jirey la yareerey isla mar ahaantaasina ay beesha caalamku dooneyso iney soo afjarto bixinta lacagihii ku bixi jirey odeyaasha si la mid ah kharashaadkii diyaarinta Dastuurka oo horey loo joojiyey. Odayaasha dhaqanka ee howshoodu dhamaatey ayaa ka caga-jiidaya in ay meelihii ay ka yimaadeen dib ugu noqdaan, doonayana dhaqaalihii ku bixi jireyna in ay sii socdaan ayaa arrintaasi waxaa si aad ah uga hor yimid beesha caalamka oo dowlada Somalia siisa taageerada iyo dhaqaalaha ku baxa howlaha shirka iyo dhameystirka xiliga kala guurka.
Odayaashaasi oo ay dowladdu dejisey hoteel u dhow agagaarka garoonka diyaaradaaha Muqdisho, ayaa Ugaas Bashiir Ugaas Xasan oo la hadlaayey Idaacad gudaha ah oo lagu magacaabo Risaala ayaa sheegey in la siiyey amar ah iney faarujiyaan guryaha ay degan yihiin ayna ku noqdaan deegaanadii ay ka yimaadeen Sidoo kale waxuu sheegey in cuni yari ay ku haysato oo cunadii ay cuni jireen laga yareeyey uusan kaseynin cida amarkaas bixisey.
Mar uu Ugaas Bashiir u tagey maamulka hoteelka ay degan yihiin si uu u ogaado cida amarkaas ka bixista bixisey ayuu maamulka hoteelka sheegey in dowladu iyo beesha caalamku oo dhaqaalaha ku baxa odayaashaa ku soo wargaliyeen arrinkaan. sidaas darteedna aysan awoodin iney odayaashaasi ku sii haayaan hoteelka.
Si kastaba ha ahaatee, odayaasha qaarkood aaminsan iney arrintaas ka bixitaanka tahay arrin dow ah maadaama howshoodii soo xulista dhamaatey isla markaasna qaar odayaashaasi ka mid ah durbaba bilaabeen iney deegaanadii ay ka yimaadeen isu diyaariyaan iney tagaan, halka qaar kale ay rabaan rabaan iney iska sii joogaan, odayaasi oo u badan kuwa isdaba marin iyo laaluush ku lug lahaa xiligii soo xulista barlamaanka ay ku howlanaayeen.
Prof Xiirey “Guddigu Farsamadu dhag jalaq uma siin doono eedeeymaha iyo hadalada ka soo yeeraya madaxweynaha, howlaheena waan wadaneynaa”
Xiliga doorashada Afhayeenka Barlamaanka oo 2 cisho dib loo dhigay